Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin: ONA oo Booqatay Magaalada Godey Q 1aad.
Warbixin: ONA oo Booqatay Magaalada Godey Q 1aad.
Posted by Dulmane	/ February 22, 2019
Magaalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeelle, waa magaalada labaad ee ugu dhumucda (badka) wayn ee Gobolada Ogadenia, waxaana xaga baaxada kawayn oo kaliya magaalada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan.
Magaalada Godey oo xaga faca aan saas usiiwaynayn ayaa si xowli ah ukoraysa waxayna si aad ah uga waynaatay magaalooyin aad ufac wayn oo qadiimi ah.
Magaalada Godey wuxuu Allaah SW makaniyay meel israatiiji ah waxayna dhacdaa dacalka woqooyi ee wabi cilaan, waxayna kufadhidaa dhulka looyaqaano Suubaan Balal oo ah dhul qiimo badan leh.
Magaalada Godey waxaa kudheeraran dhul aad uwayn oo wabiga jiinkiisa ah oo beeralay ah dhulkaas oo lagu beeri karo waxkasta oo bini’aadanku uu beerto.
Gudaha magaalada hadaan usoo laabano magaaladu waxay istaraatiiji utahay ganacsiga inkasta oo ganacsigu uu aad uliito, taas oo ay laqabto Gobolada kale ee wadanka Ogadenia.
Magaalada waxaa kuyaala dhowr Iskuul (School) walow waxbarashu aysan tayo lahayn hadana waxaa goobaha waxbarasha udareera da’a yar badan oo hadii waxbarasha loohagaajiyo anfici lahaa dalka iyo dadka, waxaana aad uyar rajada laga qabo waxbarasho tayo leh.
Sidoo kale magaalada waxaa kuyaala dhowr Isbitaal (Hospital) kuwaas oo aan ushaqaynin sidii loobaahnaa iyo si udhaw toona, saacad kastana ay jiifaan dad danyar ah oo aan helaynin adeegii ay ubaahnaayeen, balse shacab badan ay kahelaan dawooyin yar yar oo waliba lacag ah.
Dhinaca amaanka magaalada Godey waxaa kamuuqda diiftii colaadii gaamurtay ee Shacabka Soomaalida Ogadenia iyo kooxdii TPLF udhaxaysay, taas oo hada ay shacabku kasoo kabanayaan, waxaana dib dhac kasta oo magaalada kajira sabab u ahaa dulmigii guud ahaan wadanka Ogadenia kajiray kaas oo dad iyo duunyaba galaaftay.
Inkasta oo magaaladu ay aad ufidayso hadana Shacabka kudhaqan Magaalada Godey Kuma dhiiran karaan kumana dhiiranin in ay dhismayaal raandhiis leh sameeyaan iyagoo usababeeyay xukuumadii hore ee Gumaysiga oo curyaamisay ganacsigii iyo dhaqaalihii wadanka iyo amaanka wadanka oo markasta ahaa mid aan la isku halayn karin.
Magaalada Godey waa magaalo hodan ku ah dhinaca beeraha oo kufilaan lahayd guud ahaan wadanka Ogadenia, balse dadku Kama faa’iidaystaan sababo laxidhiidha maamul xumidii wadanka kajirtay mudada dheer.
Lasoco qaybta 2aad.